Akukho iinyembezi akukho umsi emhlophe ikhandlela iintsika - China Litbright Candle (Shijiazhuang)
Akukho iinyembezi akukho umsi emhlophe ikhandlela iintsika
Basic Uhlobo Info Model No .: G65CL-0625D: Material Tapered: Iparafini Wax Usetyenziso: Funeral, Nobuntu, SPA, Religion, Wedding, Party, Ibhafdeyi, Izibane Ekhaya, Decoration Umsebenzi: Izibane Color: Flavour White: Ubukhulu phunga: 8 * esiyi-20 cm ukutshisa Ixesha: 8H Ukwenziwa: Imitshini Ububanzi; 2.2cm: Ubude: 22.5cm ezongezelelweyo Packaging Info: shrinked okanye ibhegi ephaketheni Imveliso: 36tons Brand: Litbright Transportation: Ocean, loMhlaba, Air, TNT DHL UPS Indawo of Origin: China Supply Amandla: 3 × 20'fcl Certifi ...
Ubukhulu: 8 * esiyi-20 cm
Ubukhulu; 2.2cm: Ubude: 22.5cm
Packaging: shrinked okanye ibhegi ephaketheni
Zokuhamba: Ocean, loMhlaba, Air, TNT DHL UPS
amakhandlela White iintsika, amakhandlela multi-bala, iintsika, amakhandlela Taper emhlophe, multi-elimbala Taper ikhandlela. omnye wethu izinto yi-100% Iparafini Wax enye 70% iparafini wax neoli yesundu-30%. packagings zethu polybag ukubotshwa, ibhokisi ukupakishwa, sofinyela ezingxobeni cellophane ukupakisha, nathi sikwazi ukuvelisa nokupakishwa ngokweemfuno zabathengi '. imibala yethu: white, black, eluhlaza, omthubi, oluhlaza ... nawuphi na umbala uyakwazi ukukhetha. iimpawu zethu dripless, msi esha, indawo yokunyibilika ophezulu (58 ° C-60 ° C). amakhandlela ekhaya kuba grammers ezininzi ezahlukeneyo kunye neesayizi ezininzi ezahlukeneyo, loo grammers zivela 7g ukuya 100g, lo ubukhulu zivela 1.1cm ukuya 2.5cm. sasikwazi kuvelisa injani, ngobubanzi ubude kunye brand ngokweemfuno zabathengi '.
Hebei China (wase-)
Ubukhulu: 2cm Ubude: 27.5cm
Litbright Candle Factory yasekwa nineties kwinkulungwane yokugqibela. Njengomvelisi ne mveliso injalo China, esinako-10 iminyaka amakhandlela amazwe. indawo yethu Imboni malunga 48,000 square metres kwaye ungomnye abenzi amakhandlela inkulu Hebei. Thina abasebenzi phezu 800skilled kunye namagcisa 40. umthamo yethu Imveliso: 4 × 20 'izikhongozeli /day.These izinto eziintlobo ezisemgangathweni ophezulu okulungileyo, leyo ethandwa kakhulu phakathi abathengi. iimveliso zethu ziye ngaphandle Melika, eYurophu, eAfrika Australia, amazwe etc ngaphezu asibhozo.
amakhandlela indlu, ulawulo flameless kude kwakhokelela ikhandlela, amakhandlela kwiglasi engqayini, amakhandlela eqaqambileyo, amakhandlela tealight, amakhandlela intsika, amakhandlela isipho, amakhandlela, amakhandlela yamaYuda, amakhandlela ibhola, amakhandlela Taper, amakhandlela nezibhambathiso.
Igama: iintsika Candle
Ubunzima: 10,12g, 20g, 22g, 23g, 25g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 75g, 80 gram, 85g, 90g, 95g, 100g, etc
Nokuthutha: cellophane, ingxowa yeplastiki, ibhokisi, iphepha okwakhiwa
Next: Coloured indlu ikhandlela ukwenza izinto
Ezinombala oqaqambileyo streight ikhandlela kungekho ngeenyembezi kungekho ...
100% Hand obuthululwayo Amakhandlela Taper Elegant